I-China L-Glutamic Acid yoMvelisi kunye noMthengisi | IsiHaiti
Imveliso: L-Glutamic Acid
Inombolo ye-CAS: 56-86-0
Umgangatho: CP, AJI
Umsebenzi kunye nokusetyenziswa: Izongezo zesondlo, izongezo zokutya, izinto zokuthambisa, izinto eziphakathi zamayeza, njl.
icace kwaye umbala ungaphantsi
Umsebenzi: I-L-glutamic acid isetyenziswa ikakhulu kwimveliso ye-monosodium glutamate, iziqholo, kunye nezinto ezingena endaweni yetyuwa, izongezo zesondlo kunye nezinto zokuphinda zisebenze. I-L-glutamic acid ngokwayo inokusetyenziswa njengeyeza ukuthatha inxaxheba kwimetabolism yeprotein kunye neswekile kwingqondo kunye nokukhuthaza inkqubo ye-oxidation. Imveliso idibanisa ne-ammonia emzimbeni ukwenza i-glutamine engeyiyo inetyhefu, eyanciphisa i-ammonia yegazi kwaye ikhulule iimpawu zesifo se-coma. Isetyenziselwa ukunyanga i-hepatic coma kunye nokungoneliseki kwesibindi, kodwa isiphumo asonelisi kakhulu; xa idityaniswe neziyobisi ezichasayo, isenokunyanga ukuxhuzula okuncinci kunye nokuxhuzula kwengqondo. I-Racemic glutamic acid isetyenziselwa ukuveliswa kwamayeza kwaye ikwasetyenziswa njengezenzi zebhayoloji.
Ihlala ingasetyenziswanga yodwa, kodwa isetyenziswa ngokudibeneyo ne-phenol kunye ne-quinone antioxidants ukufumana isiphumo esihle sokudibana.
I-asidi yeGlutamic isetyenziswa njengearhente yokuntsokotha kwesingxobo sombane.
Isetyenziswe kumayeza, izongezo zokutya, izinto zokuqinisa isondlo;
Kuphando lwe-biochemical, isetyenziselwa amayeza ukukhusela i-hepatic coma, ukuthintela isifo sokuwa, ukunciphisa i-ketonuria kunye ne-ketemia; iyasebenza kwisifo sesibindi, i-schizophrenia, kunye ne-neurasthenia
Izinto ezingena endaweni yetyuwa, izongezo zesondlo, iiarhente zencasa (ubukhulu becala zisetyenziswa kwinyama, isuphu, iinkukhu, njl. Ingasetyenziswa njenge-inhibitor ye-magnesium ammonium phosphate crystals kwiimveliso zasemanzini ezinqiniweyo ezinje nge shrimps kunye nononkala, ngomthamo we-0.3% ukuya kwi-1.6%. Ingasetyenziselwa njengesiqholo ngokwemigaqo yelizwe lam le-GB 2760-96;
Enye yetyuwa yesodiyam, isodiyam glutamate, isetyenziswa njengesinongo, kwaye iimveliso zorhwebo zibandakanya i-MSG kunye ne-monosodium glutamate.
Egqithileyo I-Aspartic acid